ဆောင်းရာသီအတွက် အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမယ်….. – ADS Myanmar Blog
အခုဆိုရင် ရာသီဥတုကလည်း အေးသထက်အေးနေပါပြီ လူတိုင်းလူတိုင်း အနွေးထည်လေးတွေဝတ်ပြီး Style ထုတ်နေတဲ့ အချိန်ပါ
ရန်ကုန်မှာအအေးဓာတ်က သိပ်မသိသာပေမယ့် တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတော့ စိမ့်စိမ့်လေးအေးနေမှာ အသေအချာပါဘဲ……
ဆောင်းရာသီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရမယ့်အပြင် နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပါပဲ……
ဒါကြောင့်မို့ လူတိုင်းအလွယ်တကူ လိုက်နာနိုင်မယ့် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်းလေးတွေကို ads.com.mm က ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
၁. တတ်နိုင်သမျှ လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်ဆင်ပါ…..
အနွေးထည် အထူထူ ၀တ်စရာမလိုရင် မ၀တ်ချင်ရင်တောင် သင့်တော်မယ့် အပေါ်ထပ်လေးတွေ ၀တ်ပေးပါ။ ဆောင်းရာသီမှာ လေတိုက်တာများတဲ့အတွက် အသားအရည်ကို ခြောက်သွေ့ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆံသားမပျက်စီးအောင်ဦးထုတ်ဆောင်းပေးပါ။ ရာသီဥတုအေးလွန်းလျှင်လည်း ဆံသားပျက်စီး တတ် ပါတယ်။ လည်ပင်းအသားအရေပျက်စီးမှုနဲ ဆောင်းရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့လည်ချောင်းနာခြင်း ဝေဒနာကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် မာဖလာပတ်ပေးခြင်းကလည်း အထောက်အကူပြူစေပါတယ်။
ဆောင်းတွင်မှာဆို အိမ်အတွင်းနဲ့ အိမ်အပြင် အပူအအေးမညီတာကြောင့် အိမ်ထဲမှာနေလို့ပူတယ်ဆိုပြီး အနွေးထည်ချွတ်မထားပါနဲ့။အမြဲတမ်းနွေးနွေးထွေးထွေးရှိအောင်နေပါ။ အပူအအေးမညီတဲ့အခါ အရေပြား သွေးကြောလေးတွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဆောင်းတွင်မှာ အသားအရည်ပျက်စီးစေတဲ့ နောက် ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ရေချိုးရင်တောင်ကြက်သီးနွေးရေလေးနဲ့ ရေချိုးပါ အိမ်တွင်းစီးဖိနပ်ကိုလည်း သတိထားပြီးစီးပေးပါ။ ခြေထောက်အဆစ်ရောင်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၃. ဆံသားအတွက် သင့်တော်ရာရွေးချယ်ပါ…..
ဆောင်းရာသီမှာ ဆံသားတွေဟာ အားနည်းပြီး ခြောက်သွေ့ ကျိုးပြတ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို အမျိုးအစားမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဆံသားရဲ့ အခြေအနေကို လိုက်ပြီး သင့်တော်မယ့် ခေါင်းလျှော်ရည် အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ အထူးသဖြင့် အဆိုဓာတ်ထိန်း ပေးနိုင်မယ့် ရှန်ပူမျိုးကိုရွေးပါ။
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရည်ခြောက်သွေ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက လေတိုက်တာ များတဲ့အတွက် ကိုယ့်အသားအရည်ရဲ့ အစိုဓာတ်ဟာ အလွယ်တကူ ရေငွေ့ပြန်ပြီး ခြောက်သွေ့ပျက်စီး တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အစိုဓာတ်များများပါတဲ့ ခရင်မ်ကို မနက်တိုင်းပုံမှန်း လိမ်းပေးပါ။ အပြင်ထွက်တိုင်း လဲလိမ်းဖို့ သတိရပါ။ညအိပ်ယာဝင်ယာခါနီးအချိန်တွေမှာဆိုရင် မိတ်ကပ်နဲ့ မျက်နှာက အညစ်အကြေးတွေကို သေချာဖျက်၊ ခရင်မ်တစ်ခုခုလိမ်းပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ။ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာကို Scrub လုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာအသားအရည်လိုပဲ ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း အစိုဓာတ်များများပါတဲ့ လိုးရှင်းမှန်မှန်လိမ်းပေးပါ။ လိုးရှင်းပုံမှန်လိမ်းတာက ရာသီတိုင်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅. နှုတ်ခမ်းသား လေးတွေကိုလဲ ဂရုစိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့
နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ကွဲခြောက်တာဟာလဲ ဆောင်ရာသီရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နှုတ်ခမ်းကို Lip Balm ဖြစ်စေ ၊ အဆီတစ်ခုခုလိမ်းပေးပါ။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုလဲ scrub လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမွေးနုလေးတွေပါတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ဒါမှမဟုတ် ဗစ်ဆင်လင်း ထူထူလေးလိမ်းပြီး သကြားလေးနဲ့ သာသာလေးပွတ်ပေးတာမျိုးလေးတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၆. လက်လိမ်း ခရင်မ် သုံးပေးပါ
လက်မကွဲဘဲ လက်ကလေးတွေနူးညံ့နေအောင် ခရင်မ်း လိမ်းပေးပါ။ အပြင်မထွက်ခင် လက်ဆေးလျှင်လဲ ရေကိုသေချာစင်အောင်သုတ်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ပါ။ လက်မှာကျန်နေတဲ့ ရေတွေက် လေနဲ့ အမြန်ခြောက်သွေ့ပြီး လက်ကို ပိုမိုကြမ်းတမ်းစေပါတယ်။
၇. ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသောက်ပါ
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင်နေထိုင်စားသောက်တာဟာ ဆောင်းရာသီမှာ သာမကရာသီတိုင်းအ တွက်သင့်တော်တဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ။ ဗီတာမင် ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေကို များများစားပေးပါ။ ရေများများသောက်ပေးတာ ဟာ အသားအရည်ခြောက်သွေ့ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပြီး ကိုယ်တွင်း အပူကိုငြိမ်းစေပါတယ်။
အခုပြောပြတဲ့ အချက်တွေအတိုင်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သက်သာသာနဲ့ ဆောင်းရာသီ အအေးဒါဏ်ကြောင့် အသားအရည်ပျက်စီးမှုကို အကောင်းဆုံးကျော်လွှားနိုင်မှာပါ….
အခုဆိုရငြ ရာသီဥတုကလညြး အေးသထကအြေးနပေါပှီ လူတိုငြးလူတိုငြး အနှေးထညလြေးတှဝတေပြှီး Style ထုတနြတေဲ့ အခွိနပြါ
ရနကြုနမြှာအအေးဓာတကြ သိပမြသိသာပမယြေ့ တောငပြေါဒြသတှေမှောတော့ စိမြ့စိမြ့လေးအေးနမှော အသအခွောပါဘဲ……
ဆောငြးရာသီရောကပြှီဆိုတာနဲ့ ကိုယြ့ကနြွးမာရေးကို ဂရုစိုကရြမယြ့အပှငြ နောကထြပအြရေးကှီးတာတစခြုက ကိုယြ့ရဲ့ မကွနြှာနဲ့ ကိုယခြနျဓာ အသားအရကေို ထိနြးသိမြးဖို့ပါပဲ……
ဒါကှောငြ့မို့ လူတိုငြးအလှယတြကူ လိုကနြာနိုငမြယြ့ အသားအရထေိနြးသိမြးမှု နညြးလမြးလေးတှကေို ads.com.mm က ဖောပြှပေးလိုကပြါတယြ…..
၁. တတနြိုငသြမွှ လုံလုံခှုံခှုံ ဝတဆြငပြါ…..
အနှေးထညြ အထူထူ ဝတစြရာမလိုရငြ မဝတခြငွရြငတြောငြ သငြ့တောမြယြ့ အပေါထြပလြေးတှေ ဝတပြေးပါ။ ဆောငြးရာသီမှာ လတေိုကတြာမွားတဲ့အတှကြ အသားအရညကြို ခှောကသြှပေ့ကွဆြီးစပေါတယြ။ နောကပြှီး ဆံသားမပကွစြီးအောငြဦးထုတဆြောငြးပေးပါ။ ရာသီဥတုအေးလှနြးလွှငလြညြး ဆံသားပကွစြီး တတြ ပါတယြ။ လညပြငြးအသားအရပကွေစြီးမှုနဲ ဆောငြးရာသီမှာ အဖှစမြွားတဲ့လညခြွောငြးနာခှငြး ဝဒနောကနေ ကာကှယဖြို့အတှကြ မာဖလာပတပြေးခှငြးကလညြး အထောကအြကူပှူစပေါတယြ။
ဆောငြးတှငမြှာဆို အိမအြတှငြးနဲ့ အိမအြပှငြ အပူအအေးမညီတာကှောငြ့ အိမထြဲမှာနလေို့ပူတယဆြိုပှီး အနှေးထညခြွှတမြထားပါနဲ့။အမှဲတမြးနှေးနှေးထှေးထှေးရှိအောငနြပေါ။ အပူအအေးမညီတဲ့အခါ အရပှေား သှေးကှောလေးတှပကွေစြီးတတပြါတယြ။ ဒါကလညြး ဆောငြးတှငမြှာ အသားအရညပြကွစြီးစတေဲ့ နောကြ ထပအြကှောငြးအရာတစခြုပါ။ ရခွေိုးရငတြောငကြှကသြီးနှေးရလေေးနဲ့ ရခွေိုးပါ အိမတြှငြးစီးဖိနပကြိုလညြး သတိထားပှီးစီးပေးပါ။ ခှထေောကအြဆစရြောငခြှငြးကနကောကှယပြေးပါလိမြ့မယြ။
၃. ဆံသားအတှကြ သငြ့တောရြာရှေးခယွပြါ…..
ဆောငြးရာသီမှာ ဆံသားတှဟော အားနညြးပှီး ခှောကသြှေ့ ကွိုးပှတလြှယပြါတယြ။ ဒါကှောငြ့မို့လို့ ခေါငြးလွှောရြညကြို အမွိုးအစားမှနကြနစြှာရှေးခယွတြတဖြို့လိုပါတယြ။ ကိုယြ့ဆံသားရဲ့ အခှအနေကေို လိုကပြှီး သငြ့တောမြယြ့ ခေါငြးလွှောရြညြ အမွိုးအစားကိုရှေးခယွပြါ။ အထူးသဖှငြ့ အဆိုဓာတထြိနြး ပေးနိုငမြယြ့ ရှနပြူမွိုးကိုရှေးပါ။
ဆောငြးရာသီမှာ အသားအရညခြှောကသြှရေ့တဲ့ အဓိကအကှောငြးအရငြးက လတေိုကတြာ မွားတဲ့အတှကြ ကိုယြ့အသားအရညရြဲ့ အစိုဓာတဟြာ အလှယတြကူ ရငှပှေ့နပြှီး ခှောကသြှပေ့ကွစြီး တာဖှစပြါတယြ။ ဒါကှောငြ့မို့ အစိုဓာတမြွားမွားပါတဲ့ ခရငမြကြို မနကတြိုငြးပုံမှနြး လိမြးပေးပါ။ အပှငထြှကတြိုငြး လဲလိမြးဖို့ သတိရပါ။ညအိပယြာဝငယြာခါနီးအခွိနတြှမှောဆိုရငြ မိတကြပနြဲ့ မကွနြှာက အညစအြကှေးတှကေို သခွောဖကြွ၊ ခရငမြတြစခြုခုလိမြးပှီးမှ အိပယြာဝငပြါ။ နှစပြတတြစကြှိမလြောကဖြှစဖြှစြ မကွနြှာကို Scrub လုပပြေးပါ။ မကွနြှာအသားအရညလြိုပဲ ကိုယခြနျဓာကိုလညြး အစိုဓာတမြွားမွားပါတဲ့ လိုးရှငြးမှနမြှနလြိမြးပေးပါ။ လိုးရှငြးပုံမှနလြိမြးတာက ရာသီတိုငြးအတှကကြောငြးမှနတြဲ့ အလအေ့ထ တစခြုဖှစပြါတယြ။
၅. နှုတခြမြးသား လေးတှကေိုလဲ ဂရုစိုကဖြို့မမပေ့ါနဲ့
နှုတခြမြးသားလေးတှေ ကှဲခှောကတြာဟာလဲ ဆောငရြာသီရဲ့ အမှတအြသားတစခြုလိုဖှစနြပေါတယြ။ ဒါကှောငြ့မို့ နှုတခြမြးကို Lip Balm ဖှစစြေ ၊ အဆီတစခြုခုလိမြးပေးပါ။ နှုတခြမြးသားလေးတှကေိုလဲ scrub လုပပြေးနိုငပြါတယြ။ အမှေးနုလေးတှပေါတဲ့ မကွနြှာသုတပြုဝါ ဒါမှမဟုတြ ဗစဆြငလြငြး ထူထူလေးလိမြးပှီး သကှားလေးနဲ့ သာသာလေးပှတပြေးတာမွိုးလေးတှလေုပဆြောငနြိုငပြါတယြ။
၆. လကလြိမြး ခရငမြ သုံးပေးပါ
လကမြကှဲဘဲ လကကြလေးတှနေူးညံ့နအေောငြ ခရငမြး လိမြးပေးပါ။ အပှငမြထှကခြငြ လကဆြေးလွှငလြဲ ရကေိုသခွောစငအြောငသြုတပြှီးမှ အပှငထြှကပြါ။ လကမြှာကနွနြတေဲ့ ရတှကြေေ လနေဲ့ အမှနခြှောကသြှပှေီ့း လကကြို ပိုမိုကှမြးတမြးစပေါတယြ။
၇. ကနြွးမာရေးနဲ့အညီ စားသောကပြါ
ကနြွးမာရေးနဲ့ ညီညှတအြောငနြထေိုငစြားသောကတြာဟာ ဆောငြးရာသီမှာ သာမကရာသီတိုငြးအ တှကသြငြ့တောတြဲ့ အလအေ့ကငွ့ပြါ။ ဗီတာမငြ ကှယဝြတဲ့ အသီးအနှံတှကေို မွားမွားစားပေးပါ။ ရမွေားမွားသောကပြေးတာ ဟာ အသားအရညခြှောကသြှခှေ့ငြးကနကောကှယပြေးပှီး ကိုယတြှငြး အပူကိုငှိမြးစပေါတယြ။
အခုပှောပှတဲ့ အခကွတြှအတေိုငြးလုပကြှညြ့မယဆြိုရငြ ငှကေုနကြှေးကွ သကသြကသြာသာနဲ့ ဆောငြးရာသီ အအေးဒါဏကြှောငြ့ အသားအရညပြကွစြီးမှုကို အကောငြးဆုံးကွောလြှားနိုငမြှာပါ….
Author hsulattPosted on January 18, 2016 January 18, 2016 Categories Lifestyle, OtherTags ဆောင်းရာသီအတွက် အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမယ်.....
Previous Previous post: Delivery Service တွေလဲ ရှာလို့ရတယ်နော်……
Next Next post: ဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေအတွက်လဲ ရှာဖွေစရာတွေစုံလင်တဲ့နေရာ….